Netflix Drama မှာ Yoon Hyun Min နဲ့ Go Sung Hee တို့ကို အတူတွေ့ရတော့မှာလား ? – Trend.com.mm
Netflix Drama မှာ Yoon Hyun Min နဲ့ Go Sung Hee တို့ကို အတူတွေ့ရတော့မှာလား ?
Posted on December 12, 2018 by Wint
ယာယီနာမည်ပေးထားတဲ့ ”Me Alone and You” ဇာတ်ကားမှာ Yoon Hyun Min နဲ့ Go Sung Hee တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်လမှစတင်ပြီး ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့ Yoon Hyun Min နဲ့ Go Sung Hee ရော စပြီးကမ်းလှမ်းခံရချိန်မှာပဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ အထီးကျန် လွမ်းဆွတ်မှုတွေ၊ အသည်းကွဲခြင်းတွေနဲ့ ကြည်နူးစရာလေးတွေလည်း မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Yoon Hyun Min ကို IT research company ပိုင်ရှင် Go Nan Do အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဥာဏ်ပြေးတဲ့တီထွင်သူဖြစ်ပါတယ်။ Go Sung Hee ကတော့ Glass company မှ လက်ထောက် မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ဆန်းကြယ်သလို ဇာတ်ကွက်တွေကလည်း အရှိန်ဟုန်နဲ့ ကြည့်ရှုသူကိုရသမျိုးစုံ ခံစားမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
စကားနည်းသူတွေကို လျော့တွက်မိရင် သင်မှားမယ်…
စောင့်မျှော်နေတဲ့ Chilling Adventures of Sabrina part2မကြာမီ ထွက်လာတော့မည်..